Nhau - Kuvaka ramangwana
Nekushandira pamwe nevagadziri vezvivakwa, mainjiniya, vagadziri vezvivakwa, makondirakiti uye vagadziri vezvinhu, takazvipira kugadzira huwandu hwemakemikari, maumbirwo uye zvinhu.Aya matekinoroji anovandudza mashandiro, kusimba, aesthetics uye kusimba kweiyo yese yekuvaka sisitimu.Kubva kumigwagwa kusvika padenga, kubva kudzimba kusvika kune skyscrapers, tinopa mhinduro dzinogona kuderedza tsvina, kuvandudza kushanda zvakanaka, uye pakupedzisira kuzadzisa chinangwa chekusimudzira, icho chisiri chekuona chinoyevedza uye chine simba chimiro uye basa, asiwo ine yakanakisa kuchengetedza kwezvakatipoteredza maitiro.
Iyo yakareba-yakaratidza silicone tekinoroji inovhara zvakanyanya kushandiswa sealants uye epoxy zvigadzirwa, uye inowana kusimba uye yakakwirira-kuita dhizaini mukusangana kwemaitiro, mamiriro ekunze ekupikisa maapplication, gonhi negirazi rehwindo, insulating girazi, uye zvivakwa zvekushandisa.
Mukushandisa, tinozosangana nemafungiro akadai seanonamira, magirazi maviri anonamira, zvinomisikidza mamiriro ekunze, uye zvinonamira zvinodzivirira moto.Ndeapi mabasa emhando idzi dzakasiyana dzezvisimbiso?Zvinorongwa sei?
Ichi chinyorwa chichasuma kurongeka kwekuvaka silicone sealants kubva pakuona kwekushandisa.
Kuvaka silicone sealants inogona kukamurwa kuita zvikamu zvishanu zvinotevera maererano nekushandiswa kwavo: structural silicone sealants, weatherproof silicone sealants, general chinangwa silicone sealants, kaviri girazi silicone sealants ye insulating girazi, uye yakakosha-chinangwa silicone sealants.
1. Structural Silicone Sealant
Zvishandiso:Inonyanya kushandiswa kusungirira kwegirazi nealuminium sub-frames (ona Mufananidzo 1), uye inoshandiswawo kuvharisa kwechipiri girazi regirazi mumadziro akavanzika emaketeni.
Features:kutakura mutoro, simba rinokwevera zvinhu pasi, zvinodikanwa zvakakwirira zvesimba, kuramba kuchembera, uye zvimwe zvinodiwa kuti elasticity.
2. Silicone Sealant inodzivirira mamiriro ekunze
Zvishandiso:Chisimbiso chekuvhara majoini emadziro eketeni (ona Mufananidzo 1) kuve nechokwadi chekudzivirira kwemhepo uye kusimba kwemvura kwemadziro emaketeni.
Features:Inoda kutsungirira shanduko huru muhupamhi hwejoint, yakakwirira elasticity (displacement capacity), yakakwirira kuchembera kuramba, hapana simba, yakakwira modulus, yakaderera modulus.
3. General Chinangwa Silicone Sealant
Chinangwa:Kuiswa chisimbiso kwemasuo emasuo nemahwindo, kunze kwekuzadza madziro uye dzimwe nzvimbo (ona Mufananidzo 2).
Features:Kutsungirira shanduko muhupamhi hwemajoini, uye uve nezvimwe zvinodiwa zvekutama, asi hapana simba rinodiwa.
4. Two-layer Silicone Sealant yeInsulating Glass
Chinangwa:Girazi mbiri yakavharwa nenzira mbiri kuti ive nechokwadi chekugadzikana kwegirazi (ona Mufananidzo 3).
Features:Yakakwira modulus, isiri yakanyanya kupfava, mamwe ane zvimiro zvinodiwa.
5. Chinangwa chakakosha silicone sealant
Zvishandiso:inoshandiswa pakubatanidza chisimbiso nezvinodiwa zvakakosha, sechiratidzo chemoto, mildew proof (ona Mufananidzo 5), nezvimwe.
Features:Inoda kuve neimwe yakakosha kuita (senge mildew, moto, nezvimwewo).